BEVERLY HILLS ရှိအိမ်ရှင်မများအသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှုများ - အချမ်းသာဆုံးကဘယ်သူလဲ။ - သတင်း
အဆင့် - Beverly Hills ရှိအစစ်အမှန်အိမ်ရှင်မအားလုံး၏အချမ်းသာဆုံးကဘယ်သူလဲ။
Beverly Hills မှအိမ်ရှင်မများသည် ၁၀ နှစ်ခန့်ကြာခဲ့ပြီးနောက်ထိုအချိန်၌ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ကြွယ်ဝသောအိမ်ရှင်မ ၁၈ ယောက်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသော်လည်း၊ မည်သူသည်ထိုသူတို့တွင်အချမ်းသာဆုံးဖြစ်သနည်း။ Beverly Hills ၏အိမ်ရှင်မများ၏စစ်မှန်သောအိမ်ရှင်မများအသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရှာဖွေရန်အချိန်ရောက်လာပြီးသူတို့ထဲမှအချို့သည်ငွေသားဖြင့်လှိမ့်နေသည်။
ဒီဇိုင်းပုံစံတွေ၊ flash ကားတွေ၊ နာမည်ကြီးလှတဲ့ခရီးစဉ်တွေမှာသူတို့ကိုအမြဲတွေ့ရပေမယ့်သူတို့ထဲကတချို့ဟာဒီအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့လူနေမှုဘ ၀ ကိုပေးဆပ်ရန်အလွန်ကောင်းစွာတပ်ဆင်ထားကြပေမယ့်အိမ်ရှင်မတွေကအသားတင်တန်ဖိုးအချို့ကိုသင်အံ့သြလိမ့်မည်။ ထိုအခါထိပ်ဆုံးအစက်အပြောက်စုစုပေါင်းထိတ်လန့်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်သူမသည် Tom Girardi (sobs) မှခွဲထွက်ပြီးနောက်အဲရီကာဂျိန်းအတွက်နည်းနည်းပြောင်းလဲသွားသည်။ သို့သော်ဤအချိန်အတောအတွင်း Beverly Hills ၏အိမ်ရှင်မစစ်မှန်သောအိမ်ရှင်မများသည်တန်ဖိုးရှိငွေမှအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိသည်။ ဒေါ်လာအမြောက်အများ
18. Kim Richards - ဒေါ်လာ ၄၀၀၀၀၀
Kim Richards (@ kimrichards11) မျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု မေလ 23, 2020 တွင် 9:09 pm တွင် PDT မှာ
OG အိမ်ရှင်မ Kim Richards သည်စာရင်း၏အောက်ဆုံး၌ရှိသည်။ စီးရီးများစွာအတွက်သရုပ်ဆောင်နေသော်လည်းသူမပိုက်ဆံအများကြီးနားမထောင်ပါဘူး။
၁၇။ တေလာအမ်းစထရောင်း - ဒေါ်လာ ၅၀၀၀၀၀
Sooooo အအေးလွန်ခဲ့သောညနေခင်းတွင် @Ciroc အတွက် @iamdiddy ကုန်သွယ်ရေးအသစ်စတင်ခြင်းကိုထောက်ခံရန်ဖြစ်သည်။
မျှဝေသည် တေလာအမ်းစထရောင်း (@officialtaylorarmstrong) ၂၀၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက်ည ၅း၅၀ တွင် PST တွင်
တေလာအမ်းစထရောင်းသို့မဟုတ် မိန်းမသည်ကြောင်ကိုအော်ဟစ်နေသည် သင်သူမကိုသိပုံပေါ် မူတည်၍ ဒေါ်လာ ၅၀၀၀၀၀ ၀ န်းကျင်ရှိသည်ဟုအချို့ site များကခန့်မှန်းထားသည်မှာဒေါ်လာ ၂.၅ သန်းခန့်ပိုများကြောင်း၊
သူမ၏ပိုက်ဆံအများစုမှာ Beverly Hills ရှိ Real Housewives ပွဲများမှသူမ၏သရုပ်ဆောင်မှုများမှရရှိလိမ့်မည်။
၁၆ ။ Kathryn Edwards - ဒေါ်လာ ၂ သန်း
ဒါဟာကျနော်တို့ပွေ့ဖက်လူမဟုတ်ကြထိုအချိန်လောက်ပါပဲ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်သိမ့်မှုအရရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့မှုမရှိခြင်းသည်ကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်ထားသောကော့တေး၏ကုသနိုင်စွမ်းနှင့်မကိုက်ညီဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ ဒီတနင်္ဂနွေနေ့ကိုတာဝန်သိစွာသောက်ပါ
မျှဝေသည် K သည်တစ် ဦး က T-H ကို R ကို Y ကိုအီး D ကို W တစ် ဦး က R ကို: D S က 1:58 pm တွင် PDT မှာ, 2020 အောက်တိုဘာ 30, (@ katedwards8)
ကက်သရင်းသည်ရာသီတစ်ခုတည်းတွင်သာပါဝင်ခဲ့ပြီးအသားတင်ကြွယ်ဝမှုမှာဒေါ်လာ ၂ သန်းရှိသည်။ ကက်သရင်းသည်သူမ၏မော်ဒယ်လ်နေ့များမှသူမ၏ငွေအများစုကိုရယူပြီးပြသခြင်းတွင်ပါ ၀ င်လိမ့်မည်။
၁၅ ။ Eileen Davidson - ဒေါ်လာ ၃ သန်း
#vowforgirls သို့သင်၏လက်ကိုချီပါ။ နှစ်စဉ်မိန်းကလေး ၁၂ သန်းသည်လက်ထပ်ကြသည်။ # COVID19 ကြောင့်ထိုအရေအတွက်တိုးလာလိမ့်မည်။ ယခုမှ စ၍ #DayoftheGirl (အောက်တိုဘာ ၁၁) အထိ #vowforgirls ကို အသုံးပြု၍ သင်၏လက်ဖြင့်မြှောက်ထားသောဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုတင်ပါ။ 1 ပို့စ် = $ 1 @vowforgirls မှ, $ 85k အထိ, @CrateandBarrel @sundance_now မှ။
မျှဝေသည် Eileen Davidson (@eileendavidsonofficial) အောက်တိုဘာ ၈၊ ၂၀၂၀ မှာညနေ ၄း၄၃ နာရီမှာ PDT
Eileen သည်အချစ်ဆုံးအိမ်ရှင်မများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သော်လည်း Beverly Hills ရာသီအတွက်တစ်နှစ်လျှင်ဒေါ်လာ ၇၅၀,၀၀၀ ရရှိရန်စီမံနိုင်ခဲ့သည်။
သူမသည် The Young and The Restless အပါအ ၀ င်နှစ်များတစ်လျှောက်သူမလုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်သရုပ်ဆောင်အလုပ်များမှသူမ၏အသားတင်အမြတ်ကိုရရှိစေလိမ့်မည်။
၁၄ ။ Brandi Glanville - ဒေါ်လာ ၅ သန်း
မျှဝေသည် Brandi Glanville 3:23 pm တွင် PDT တွင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက် (@brandiglanville)
ဖရန့်ဂလန်းဗီးလ်မှာဖရိုဖရဲဖြစ်နေတဲ့ဘုရင်မကြီးကအသားတင်ဒေါ်လာ ၅ မီလျံရှိပါတယ်။ သူမ၏ငွေသည်မော်ဒယ်လ်အလုပ်များ၊ သူမ၏စာအုပ်များနှင့်ရီးရဲလ်အိမ်ရှင်မများအပေါ်အသွင်အပြင်များမှလာသည်။
ဒါဟာအိမ်ရှင်မတစ်ရာသီနှုန်း $ 175,000 နားမှာခန့်မှန်းခဲ့သည်။
၁၃ ။ Erika Girardi - ဒေါ်လာ ၅ သန်း
ＥＲＩＫＡ by (@theprettymess) မှမျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု 9:45 pm တွင် PDT မှာအောက်တိုဘာ 23, 2020 တွင်
Erika Girardi သည်အကောင်းဆုံးအိမ်ရှင်မများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Erika သည်ဖက်ရှင်အချိန်ကာလများနှင့်သူမ၏ Erika Jayne ဖျော်ဖြေပွဲများကိုစိတ်အားတက်ကြွစေသည်။
အဲရီကာ Girardi ၏အသားတင်တန်ဖိုးမှာဒေါ်လာ ၅ သန်းဖြစ်သည်။ သို့သော်ဒေါ်လာ ၃၀ မီလျံတန်သော Tom Girardi ထံမှကွာရှင်းတော့မည်ကိုကြေငြာခြင်းဖြင့်တိုးမြှင့်ဖို့သေချာသည်။
၁၂။ Garcelle Beauvais - ဒေါ်လာ ၈ သန်း
#braid ဆံပင်နေ့ဖြစ်ခြင်း throb #robearhair #makeup @jjulesbeauty
မျှဝေသည် Garcelle Beauvais 2:50 pm တွင် PST မှာနိုဝင်ဘာ 2, 2020 ရက်တွင် (@garcelle)
Garcelle သည် Beverly အိမ်ရှင်မများ၏ရီးရဲလ်အိမ်ရှင်မများတစ်ရာသီတည်းသာရှိသေးသော်လည်းသူသည်ဒရာမာနှင့်အလွန့်အ ၀ တ်အထည်များကိုယူဆောင်လာပြီးဖြစ်သည်။
11. Ohoven မှ Joyce Giraud - ဒေါ်လာ ၁၀ သန်း
သင်တစ် ဦး စိန်ပျားရည်ကိုမလိုအပ်ပါဘူး ... သင်တစ် ဦး စိန် #AlwaysFollowYourHeart #BeKind #SpreadLove #TheSecretToTrueJoy သင်တစ် ဦး စိန်ဖြစ်ကြသည်။ # throwingitwayback❤️ #TB lil Story ... သူတို့သည်ငါ့ကိုရိုက်ကူးဘို့ငါယူ။ လမ်းလည်းကြီးမားလွန်းသောဤတ ဦး တည်းကိုမဝတ်ဆင်ခွင့်ပြုမထားဘူး။ သူတို့ကငါသွား၏နောက်ကျောနှင့်ပိတ်ပင်ထားမှုမှာ Taskbar မှာအရင်ကမရှိသေးတဲ့ ... ဒါပေမယ့်ငါကအမြဲတမ်းငါ၏အအလှအပပြောပြသကဲ့သို့ ... သင်ကအားလုံးစိတ်သဘောထား, သင်၏ယုံကြည်မှုနှင့် #PositiveVibes အကြောင်းကိုဒါကြောင့်သင်နေဖို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်တစ် ဦး အာလူးအိတ်၌ထွန်းလင်းနိုင်ပါတယ်! #BeYouTiful သင်တစ် ဦး တည်းသာရှိသည်! ။ ။ #throwbackthursday #RHOBH #stepawayfromnegativity #choosehappiness #choosepositivity #SprinkleSeedsOfKindness သင်သွားလေရာရာ၌
မျှဝေသည် JOYCE GIRAUD (@joyce_giraud) ၂၀၂၀၊ အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်ည ၈း၀၀ နာရီတွင် PDT
Ngl Joyce အကြောင်းလုံးဝမေ့သွားပြီးထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စွာဖြင့်သူမသည်ဘဏ်ထဲမှာအများကြီးရှိနေသည်။ Joyce ဟာသူမရဲ့ငွေကိုပြသမှုမှာပါ ၀ င်ခဲ့ပြီးမော်ဒယ်လ်နဲ့သရုပ်ဆောင်ခြင်းကိုလည်းပါ ၀ င်ခဲ့ပါတယ်။
သူမ၏ခင်ပွန်းဖြစ်သူရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူမိုက်ကယ်သည်ဘဏ်တွင်ဒေါ်လာသန်း ၅၀ ကျသင့်သည်။
10. Add Breast - ဒေါ်လာ ၁၀ သန်း
Versace Versace Versace ✨ဓာတ်ပုံ: နာရီ
မျှဝေသည် L ကိုငါ S ကတစ် ဦး က R ကိုငါ N ကို N ကိုတစ် ဦး (@lisarinna) ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက်ည ၈:၄၄ နာရီ၊ PDT တွင်
အမျိုးသမီး Lisa Rinna ထက်အထင်ကရမိန်းမတစ်ယောက်လား။ Lisa သည်သူမအတွက်သရုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်မော်ဒယ်လ်များစွာမှရရှိသောဝင်ငွေများ၊ QVC နှင့်သူမ၏ဒရာမာကိုယူဆောင်လာရန်အာမခံထားသော Real Housewives မှအများအပြားစုဆောင်းထားခြင်းများမှရရှိသည်။
အံ့သြစရာမဟုတ်ပါကသူမသည်တစ်ရာသီလျှင်ဒေါ်လာ ၄၅၀၀၀၀ ပေးသည်။
သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရန်
Teddi Mellencamp - ဒေါ်လာ ၁၂ သန်း
ကျန်းမာသောအစားအစာအလေ့အထများနှင့်အကြံဥာဏ်များကိုကျွန်ုပ်အားအများကြီးတောင်းခဲ့ပြီးဒါကြောင့် Q & A လုပ်ခြင်းသည်ပျော်စရာကောင်းသည်ဟုထင်ခဲ့သည်။ အခုငါ့ပုံပြင်တွေကိုသွားကြည့်ပါ ဦး ။ ငါတတ်နိုင်သမျှအများအပြားဖြေဆိုရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်
မျှဝေသည် Teddi Mellencamp Arroyave (@teddimellencamp) နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်၊
စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာကောင်းသော်လည်းအဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသော Teddi Mellencamp ကိုရီးရဲလ်အိမ်ရှင်မများမှဖယ်ထုတ်ပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်သူမဘဏ်တွင်ဒေါ်လာ ၁၂ သန်းဖြင့်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မည်ကိုငါသံသယရှိသည်။
Teddi ဟာသူမရဲ့တာဝန်ခံမှုအစီအစဉ်ကိုမ ၀ င်ခင်မှာသရုပ်ဆောင်အခန်းကဏ္ from များစွာမှရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခု ၀ န်ထမ်း ၄၀ ရှိပါပြီ။
၈။ Denise Richards - ဒေါ်လာ ၁၂ သန်း
@washingtonpost အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အက်ရှလေ၊ ငါ့ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းအတွက်သင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်းရဲ့ကြင်နာပြီးကူးစက်ရောဂါတွေကြောင့်ငါ့ကိုသက်သောင့်သက်သာဖြစ်စေတယ်၊ ​​သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့စကားပြောနေသလိုခံစားရတယ်။ အထူးသဖြင့် Covid ကာလအတွင်းလှပသောဓါတ်ပုံများရိုက်ယူသည့်အတွက် Roger အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သင်ထွက်လာပြီးဒီအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဓာတ်ပုံများကို (အကွာအဝေးမှအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာနှင့်မျက်နှာဖုံးစွပ်ဖြင့်ရိုက်ကူးခြင်း) သည်ကျွန်ုပ်အတွက်များစွာဆိုလိုသည်။ ကျွန်ုပ်တစ်နေ့လုံးရိုက်နိုင်ခဲ့သည်။ သင်၏အဖွဲ့သည်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်ုပ်၏အထင်ကရလူသိရှင်ကြားကြေငြာသူ Jill (ရိုင်းစိုင်းသည့်နေ့များသို့ပြန်လှည့်ပါ) ဤအရာကိုပြင်ဆင်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ & စတီဖင်သင်သည်အစဉ်အဆက်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ကြသည်။ ထိုအခါငါ၏ glam များအတွက်ငါ၏အမိန်းကလေးများ Laura & Pam ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ... ငါဒီအချိန်ကာလအတွင်းကကျွန်တော်တို့ကိုဒါနီးကပ်အလုပ်လုပ်ကိုင်မလွယ်ကူကူခြင်းနှင့်ငါဇီဝအတွက်မင်္ဂလာSunday❤️ link ကိုနှစ် ဦး စလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မျှဝေသည် Denise Richards (@deniserichards) ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်၊
Denise ဟာအလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ရာသီနှစ်ခုပြီးနောက်ရီးရဲလ်အိမ်ရှင်မတွေကိုစွန့်ခွာခဲ့ပြီးသူမအတွက်ရာသီတစ်ခုစီအတွက်ဒေါ်လာ ၁ သန်းပေးရပါတယ်။ သို့သော်သူမ၏စည်းစိမ်ဥစ္စာ၏တစ်ခုတည်းသောအရင်းအမြစ်မဟုတ်ပါဘူး။
ပိုက်ဆံသယ်ဆောင်လာသည့်သရုပ်ဆောင်နှင့်မော်ဒယ်လ်စီမံကိန်းများအပြင် Denise လည်းဖြစ်သည် သတင်းများအရ သူမ၏ခင်ပွန်းဟောင်းချာလီ Sheen မှကလေးအထောက်အပံ့များစွာရရှိသည်။ သူမသည်တစ်လလျှင်ကလေးတစ် ဦး လျှင်ဒေါ်လာ ၅၂ ဒေါ်လာရရှိခဲ့သော်လည်း၎င်းအားမည်မျှကောင်းသည်ကိုဒေါ်လာ ၂၀K လျှော့ချခဲ့သည်။
သူမသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်သူမ၏ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိကိုလည်းရေးသားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်သူမသည်ဒေါ်လာအနည်းငယ်သာရရှိနိုင်လိမ့်မည်။
၇။ Yolanda Hadid - ဒေါ်လာ ၄၅ သန်း
Sunday မိသားစုတနင်္ဂနွေ…… ..
မျှဝေသည် ယိုလန် 10:42 pm တွင် PDT မှာစက်တင်ဘာလ 28, 2020 တွင် (@ yolanda.hadid)
Gigi နှင့် Bella ၏မိခင်သည်ငွေအမြောက်အမြားရှိသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကစံပြပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သော Yolanda သည်ငွေရှာ။ LA ရှိတိုက်ခန်းတစ်ခန်းကိုဝယ်ယူခဲ့ပြီးနောက်နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ထိုငွေများကိုများစွာထပ်မံရောင်းချခဲ့သည်။
Yolanda သည်အိမ်ရှင်မများထံမှပေါ်ထွက်လာသည့်ငွေများလည်းရရှိနေသည်။ ထိုတွင်သူမသည်ရာသီတစ်ခုစီအတွက်ခြောက်လစာလစာရခဲ့သည်။
Mohammed Hadid နှင့် David Foster တို့မှသူမ၏ကွာရှင်းမှုများမှလည်းသူမသည်ငွေများစွာရရှိခဲ့သည်။
၆။ Camille Grammer - ဒေါ်လာသန်း ၅၀
မျှဝေသည် Camille Meyer (@therealcamille) ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်၊
Camille သည် Beverly Hills ရှိနာမည်ကြီးရီးရဲလ်အိမ်ရှင်မများအနက်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီး Kelsey Grammer မှသူမ၏ကွာရှင်းမှုမှရရှိသောကံကြမ္မာ၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းကိုရရှိခဲ့သည်။
Camille လက်ခံရရှိခဲ့သည် ကွာရှင်းမှုအတွက်ဒေါ်လာသန်း ၃၀ ရရှိခဲ့သော်လည်းသူမ၏လက်ထပ်ခြင်းမတိုင်မီသရုပ်ဆောင်ခြင်းမှသူမ၏ကိုယ်ပိုင်ငွေကိုရရှိခဲ့သည်။
၅ ။ Adrienne Maloof - ဒေါ်လာသန်း ၅၀
မျှဝေသည် Adrienne Maloof (@adriennemaloof) ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ သြဂုတ် ၂၉ ရက်၊ ညနေ ၉း၅ နာရီတွင် PDT တွင်
Adrienne သည်အထင်ကရ OG သရုပ်ဆောင်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသူမသည်ကြီးမားသောအိမ်ကြီးနှင့်ပလပ်စတစ်ခွဲစိတ်ဆရာဝန် Paul Nassar နှင့်လက်ထပ်ခဲ့သည်။ သို့သော် Adrienne သူမ၏ပိုက်ဆံသူ့ကိုယ်သူဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။
သူမသည်သတင်းများအရအိမ်ရှင်မများ၏ရာသီနှုန်း $ 200,000 earnt ပြီးတော့သူမအားကစားနှင့်ဂီတစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွင်းကုမ္ပဏီများမှပါဝင်သောသူမ၏မိသားစုရဲ့စီးပွားရေးအင်ပါယာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Adrienne တွင်သူမကိုယ်ပိုင်ဖိနပ်အကွာအဝေးနှင့် Never Too Hungover ဟုခေါ်သော hangover ဖြည့်စွက်ချက်များစွာရှိသည်။
4. Dorit Kemsley - ဒေါ်လာသန်း ၅၀
မျှဝေသည် Dorit Kemsley (@doritkemsley) အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်၊
နည်းပညာပိုင်းအရဤအသားတင်တန်ဖိုးသည်သူမ၏ခင်ပွန်း PK ၏အသားတင်တန်ဖိုးနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ပိုက်ဆံပြproblemsနာများနှင့်ပတ်သက်သည့်ကောလာဟလများပြီးနောက် Dorit နှင့် PK တို့သည်အလွန်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နေကြသည်။
Dorit သည်သူမ၏ရေကူးဝတ်စုံစုဆောင်းသည့် Beverly Beach မှငွေအမြောက်အမြားရရှိခဲ့ပြီးအိမ်ရှင်မများနှင့် PK တွင်ပေါ်ထွက်လာခြင်းကသူ၏ငွေများကိုမန်နေဂျာနှင့်အိမ်ရာဆောက်လုပ်သူအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခြင်းမှရရှိခဲ့သည်။
၃။ Vanderpump ကိုပေါင်းထည့်ပါ - ဒေါ်လာသန်း ၉၀
ယနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ #VeryVanderpump စပျစ်ရည်အတွက်ကျွန်ုပ်နှင့် @PandoraVT ၌ပါဝင်ရန်မမေ့ပါနှင့်! ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်လီဖိုးနီးယားမှကျွန်ုပ်တို့၏ @VanderpumpWines အသစ်၊ @vanderpumpsangria နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏Roséအကြောင်းဆွေးနွေးကြမည်။ 6:30 PM ET / 3:30 PM ET တွင်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ နေ့လည်ခင်းဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့ virtual event ကိုညှိနှိုင်းပါ။ @betsnewman မှအသေးစိတ်အတွက် vanderpumpwines.com/buyonline သို့ဝင်ရောက်ရန် bio သို့ဆက်သွယ်ပါ
မျှဝေသည် Lisa ကို Vanderpump 2:01 pm တွင် PDT မှာ, 2020, သြဂုတ် 19, (@lisavanderpump)
အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း Lisa ဟာစာရင်းထဲမှာအမြင့်ဆုံးရောက်တော့မယ်ဆိုတာသိသင့်တယ်။ Lisa ဟာသူမနဲ့ Ken နှစ် ၃၀ ကျော်ပြေးခဲ့တဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေ၊ အရက်ဆိုင်တွေကြောင့်တကယ့်ကိုအံ့အားသင့်စရာကောင်းလောက်အောင်ပါပဲ။
Lisa သည်အိမ်ရှင်မတိုင်းစီးရီးအားလုံးနီးပါးပေါ်ထွန်းရန်ငွေအမြောက်အများသာမကသူမ၏ Vanderpump စည်းကမ်းများပြသရာမှသူမသည်တစ်ရာသီလျှင်ဒေါ်လာ ၅၀၀ ၀ င်ငွေခန့်မှန်းထားသည်။
အကယ်၍ ၎င်းမလုံလောက်ပါက Lisa တွင် Vanderpump အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များ၊ လက်ဝတ်ရတနာများနှင့်အပိုငွေအချို့ယူဆောင်ရန်သေချာသည့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များရှိသည်။
၂။ Kyle Richards - ဒေါ်လာသန်း ၁၀၀
ဝမ်းနည်းပါတယ်။ @doritkemsley နောက်ကျသွားပြီ။ #butforreal အတွက်ဂရမ်အတွက်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်နေတယ်
မျှဝေသည် Kyle Richards Umansky 9:07 pm တွင် PDT မှာအောက်တိုဘာ 24, 2020 ရက် (@ kylerichards18)
Kyle Richards မှထွက်ခွာသွားသော Beverly Hills မှထွက်ခွာသွားသည့်တစ် ဦး တည်းသောအဖွဲ့ဝင်သည်အိုင်ကွန်ဖြစ်သည် ပြီးတော့သူမငွေအမြောက်အမြားစုဆောင်းနေတဲ့စီးရီးတွေအားလုံးထဲမှာပေါ်လာတာကိုသူမကတစ်ရာသီမှာဒေါ်လာ ၂၇၀ ကျပ်ရမယ်လို့ကောလာဟလတွေထွက်နေပါတယ်။
သို့သော်ထိုသို့သူမကသူမ၏ကံဇာတာကိုလုပ်မယ့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမဟုတ်ပါဘူး, သူမကလေးတစ် ဦး မင်းသမီးကြီးနှင့်ပိုပြီးမကြာသေးမီကထုတ်လုပ်သူအခန်းကဏ္ on အပေါ်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ Kyle သည်အောင်မြင်သောအိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ Mauricio နှင့်အိမ်ထောင်ကျပြီး Kyle တွင်လည်းသူမ၏ကိုယ်ပိုင်စတိုးဆိုင်ရှိသည်။
၁။ Carlton Gebbia - ဒေါ်လာသန်း ၁၅၀
Muma ယိုယွင်းနေတယ်။ ငါ့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကငါ့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုချစ်ခြင်းရဲ့ #chromehearts နားကပ်ကပိုပြီးပြည့်စုံတဲ့ဘယ်အရာမှမှမရှိ။ တကယ့်ကိုသွေးထွက်သံယိုလှတဲ့…ငါအရမ်းချစ်တဲ့အချစ် ဦး #birthday #blessed #familily #myeverything
မျှဝေသည် Carlton 3:10 pm တွင် PDT မှာအောက်တိုဘာလ 17, 2019 ရက်တွင် (@ carlton1311 @)
ငါထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေပြီး Carlton သည် Beverly Hills တွင်အချမ်းသာဆုံးအိမ်ရှင်မဖြစ်မည်ဟုလုံးဝမမျှော်လင့်ခဲ့ပါ။ သေချာတာကကုန်ကျစရိတ်များတဲ့သူမ၏စုန်းမအိမ်ကိုပြန်ကြည့်ရင်ငါစောစောကသံသယဖြစ်သင့်သည်။
Carlton သည်မင်းသမီးနှင့်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်နာအဖြစ်အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းပြုခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး RHOBH ၏တစ်ရာသီလုံးတွင်သဘာဝအတိုင်းပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
• ပဟေizိ - ဘီဗာလီဟေးလ်၏ရီးယဲလ်အိမ်ရှင်မများသည်မည်သည့်အထင်ကရအိမ်ရှင်မဖြစ်သနည်း။
• ပဟေizိ - နယူးယောက်မြို့ရှိရီးယဲလ်အိမ်ရှင်မများမှမည်သည့်အိမ်ရှင်မအိမ်ရှင်မဖြစ်သနည်း။
• အဆင့် - တရားဝင်အားလုံးထဲမှာအချမ်းသာဆုံးအိမ်ရှင်မကဘယ်သူလဲ။